ကျွန်တော်တို့ လိုပါသေးသည်.. | မိုးသကျဦးလှငျ
ပရဟိတစိတ်ရှိသူအားလုံးကို စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတအဖွဲ့မှကြိုဆိုပါသည်...အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန်ဤနေရာတွင်ဖတ်ရှုပါ.။
Home » ဆောင်းပါး » ကျွန်တော်တို့ လိုပါသေးသည်..
ဒီနေ့ည Concert ကို ဘယ်သူမှ အဖော်မပါပါပဲ တစ်ယောက်တည်း သွားဖြစ်သည်.။ Concert hall ထဲ ဝင်လိုက်တော့ မိမိ လို လာကြည့်ကြသူ ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားတွေကို တွေ့ရသည်..။ အမှန်က မိမိ ဒီစာကို ရေးချင်နေသည် မှာ ကြာပါပြီ..။ သူတို့ ကျောင်းသားတွေကိုတွေ့ရတိုင်း၊ အဲဒီလို နုပျိုလန်းဆန်းသည့် ၂၁ ရာစု၊ သားပျို သမီးပျို၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ/ ကျောင်း သားများက သူတို့ ရုရှားရိုးရာ အကတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ (မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်) ဆင်နွှဲသည့်အခါတိုင်း ဒီစာကို ရေးမည်ဟု စိတ်ကူးမိသည်.။သို့ပေတည့် မိမိဖာသာအလုပ်ရှုပ်နေတာက တစ်ကြောင်း၊ အပျင်းထူနေတာက တစ်ကြောင်းတို့ ကြောင့် တကယ့်တကယ် ရေးမည်ဆို တိုင်း မေ့သွားတာ မျိုး၊ တစ်ခြားအလုပ်တွေကြား ညပ်ညပ် ပါသွားတာမျိုးဖြစ်သွားတတ်သည်.။
ထားပါတော့..။ ကျွန်တော် အခု ပြောချင်သည့် အကြောင်းက နိုင်ငံရေးလည်း နည်းနည်းပါကောင်းပါမည်.။ အမျိုးသားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာတွေလည်း နည်းနည်းပါကောင်းပါမည်...။ ပညာရေးဆိုတာလည်း ပါကောင်းပါမည်...။ ထိုသို့ သော အရာများနှင့် မပတ်သတ်ပါရစေနှင့် ဆိုသူများ ဤနေရာမှ ပိတ်ပစ်၍ ရပါသည်.။
အနီးဆုံးအစက ဆွဲထုတ်ရေးရလျှင် ပညာရေးကပင်စပြောရမည်..။ ကျွန်တော်တက်နေသည့် ကျောင်းက မော်စကို ရူပ နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဖြစ်သည်.။ နိုဘယ်ဆုရှင်တွေရှိသော၊ အာကာသနည်းပညာတွင် နာမည်ကြီးသောကျောင်း ဖြစ်သည်.။ မိမိက ကျောင်းအကြောင်းကို ပြောလိုသည်မဟုတ်၊ ကျောင်းသားများ အကြောင်းကို ပြောလိုခြင်းဖြစ်သည်..။
သူတို့ ဆီက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ အင်မတန် ယဉ်ကျေးကြသည်...။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စကားပြောလျှင် ထိပ်ပုတ် ခေါင်းပုတ် လုပ်တာ အင်မတန်ရှားသည်.။ ရပ်ပြီး ခပ်တည်တည်နှင့်စကားပြောတာများသည်.။ ဘရုတ်သုတ်ခ ကျောင်းသားများ မရှိမဟုတ်၊ ရှိသည်သာ.။ သို့ရာတွင် အင်မတန်ရှားပါးသော အရေအတွက် ဖြစ်သည်.။ ကျောင်းချိန်မီအောင် မနည်းအပြေးအလွှားကျောင်းတက်ကြရသည်.။ ကျောင်းပျက်သူလည်း ရှားပါးလှသည်.။ Roll call ခေါ်ပြီး ကျောင်းလစ်လို့မရ...။ လစ်လိုသူလည်း မရှိ..။ ကျောင်းသားက ကျောင်းသားအလုပ်ကို တာဝန်ကျေအောင် လုပ်ကြသူတွေများသည်.။
(ကျွန်တော်ရေးဖူးတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တစ်ဦးချင်း စိတ်ဓါတ်တွေအကြောင်း..)
တစ်ဖက်က ပြန်ကြည့်လျှင်မူ. သူတို့ဆီမှာ မိဘ၏ ပယောဂကြောင့် တက္ကသိုလ်ရောက်လာသူမရှိသလောက်ရှားသည်.။ တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရာတွင်ပင် ဓာတုဗေဒကို အားသန်သူက ဓာတုဗေဒတက္ကသိုလ်၊ ဆရာဝန်ဖြစ်လိုသူက ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ရူပဗေဒကို စိတ်ဝင်စားသူက ရူပတက္ကသိုလ် စသည်ဖြင့် မိမိတို့ အကြိုက်ဆုံး၊ အားအသန်ဆုံး၊ အရူးသွပ်ဆုံး ဘာသာရပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်တက်ရောက်ကြသည်..။ မိမိတို့ ရူပဗေဒ ကျောင်းတွင်တက်သော ကျောင်းသားများသည် “ ငါတို့က ရူပမှ ရူပ ” ဆိုသူတွေချည်း ဖြစ်သည်.။ ဒီဘာသာကို ရူးသွပ်မှတော့ ဒီစာသင်ရတာ မပျော်ရှိပါမည်လား.။ အားရင် စာဖတ်၊ တစ်ကုတ် ကုတ်နှင့် တွက်ချက်။ တစ်ခေါက်ကလည်း ဆရာနှင့် ဌာန ဓါတ်ခွဲခန်းသွားစဉ်က မုတ်ဆိတ်မွှေး၊ ပါးသိုင်းမွှေး မျက်မှန်အထူကြီးတွေနှင့် အဆောင်တောင် မပြန်လိုသော ပါရဂူ ကျောင်းသား တွေ အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုတွေ့ဖူးသည်.။ ဒီလို ရူးသွပ်မှုတွေနဲ့ ဒီလို ကျောင်းသားတွေ နိုဘယ်ဆုရတာ ဘယ်ဆန်းမလဲဟု တွေးနေမိသည်..။ မြန်မာပြည်မှာလို သားက GTC တက်ချင်၊ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင် လျက်နဲ့ မိဘက ဂုဏ်မက်ပြီး ဆေးကျောင်းတက်ခိုင်းတာမျိုးကို ပြောချင်တာ ဖြစ်သည်.။ အင်ဂျင်နီယာ ကောင်းတစ်ယောက်အစား ခပ်ညံ့ညံ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက် နိုင်ငံအတွက် ပိုလာတာပဲ အဖတ်တင်သည်.။ ထို ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး မိမိ ဘလော့မှာ မိမိအနာဂတ်ကို မိမိလက်တွင်းမှာသာ ထားပါဆိုသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ဖူးသည်.။ မန်းအိမ်က အဘွားနှင့် ထိုကိစ္စကို စကားပြောဖြစ်သေးသည်.။ အဘွားက တစ်ခွန်းပြန်ပြောသည်..။
ဟဲ့ ငါ့မြေးရဲ့ ခုခေတ်ကလေးတွေကို ဝါသနာပါတာ တက်ခိုင်းပြန်တော့.... ဘာမှ ဝါသနာမပါဘူး ဆိုတဲ့သူက ခပ်များများရယ်
တဲ့ ..။ ကျွန်တော် ဘာပြောရမှန်း မသိ ဖြစ်သွားခဲ့ဖူးသည်.။
(ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းက နိုဘယ်ဆုရှင်များ... )
နောက်တစ်ခု တွေ့မိတာက ကျောင်းသားအချင်းချင်းဆက်ဆံရေး ဖြစ်သည်..။ သူတို့ဆီမှာကလေးစိတ် မပျောက်သေးသောအရွယ်က အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာ ကုန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်..။ ပြဿနာရှာချင်သော အရွယ်ကုန်ခဲ့ပြီဟုပင်ဆိုရမလား..။ အထက်တန်းကျောင်းသား ဖြစ်လာလျှင်ပင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပုံစံ ဖမ်းချင်သည်.။ ခပ်တည်တည်နှင့် စကားပြောကြသည်.။ ကျောင်းသားအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်သည်ကို ကြားပင်မကြားစဖူး..။ သူတို့လည်း အရက်သောက်သည်..။ သောက်တာမှ ပက်ပက်စက်စက်ကို သောက်သည်.။ သို့သော် ရန်ဘယ်တော့မှ မဖြစ်..။ တစ်ခါက မိမိနှင့် သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် ဘာသာစကားချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ဝိုင်းအလှောင်ခံရဖူးသည်.။ သူငယ်ချင်းက စိတ်ဆိုးသည့် အမူအယာ ပြတော့ မျက်နှာပိုးသတ်ကာ ချက်ခြင်းပင် လာတောင်းပန်သည်.။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုသည်မှာ ထိုသို့ လူယဉ်ကျေးများ ဖြစ်သည်..။
တကယ့်တကယ်ပင် “ ဟေ့ကောင်မလေး ဒီမှာ မြန်မာပြည်ဟာ.. ကမ္ဘာမှာ အယဉ်ကျေးဆုံး တိုင်းပြည် တစ်ခုပါ. ” ဆိုသော သီချင်း နားထောင်ပြီး ကျေနပ်မနေကြသင့်တော့ပါ..။ ကျွန်တော် ကြုံခဲ့ ကြားခဲ့ဖူးသော မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ် အသိုင်းအဝိုင်းက အားရစရာ တစ်ခု မှ မရှိ.။ အစိုးရက အထောက်အပံ့ မပေးနိုင်တာ တစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်.။ ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများက ကျောင်းထက် လမ်းထွက်ရတာ ပိုပျော်နေကြသည်.။ ကျောင်းအချင်းချင်း မတည့်..။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကတော့ အတော် ထိုင်ကြသည်..။ လူငယ်အချင်းချင်း ခပ်စူးစူးကြည့်မိလျှင်ပင် ရန်ဖြစ်ကြ၊ ရိုက်ကြ ၊ နှက်ကြသည်..။ Game ဆိုင်တွေမှာ ကျောင်းသားတွေချည်း ဖြစ်သည်.။ အပြင်လူပင် သိပ်မရှိ..။ တကယ့်တကယ် မြန်မာပြည်တွင် ယဉ်ကျေးမှု များ အင်မတန် ထွန်းကားသည် ဆိုတိုင်းပင် ပုဂံဘုရားဘေးက ပိုက်ဆံပေးပြီး သနပ်ခါးလိမ်းခိုင်း ရယ်ခိုင်းထားသည့် ကလေးမလေး၏ ဓါတ်ပုံထဲက အပြုံးဖြင့်သာ ဂုဏ်ယူ မနေသင့်တော့ပါ..။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတိုင်း ကျေးလက်တောရွာတွေ၊ ရွှေတိဂုံက တံမြက်လှည်းအသင်းတွေ လောက်ဖြင့် မတင်းတိမ်သင့်တော့ပါ..။ အချိန်မရွေး၊ ကာလမရွေး၊ ဒေသမရွေး လူရော၊ စိတ်နှလုံးရော လူကြီးလူကောင်း ပီသစွာ ယဉ်ကျေးတတ်ရန် လိုပါပြီ..။
နောက်တစ်ခုက ဆရာတပည့် ဆက်ဆံရေးပင် ဖြစ်ပါသည်..။ သူတို့ဆီမှာ ဆရာနှင့် တပည့်က လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာပင် မိတ်ဆွေ သဖွယ်ပေါင်းသင်းကြသည်.။ ကြားတွင် မည်သည့် Tension မှ မရှိ.။ ဂါရဝ ဆိုတာတော့ မရှိ၊ Respect တော့ ရှိသည်..။ တာဝန်နှင့် အလုပ်ကိုလေးစားသည့် သဘောတော့ ရှိသည်..။ တစ်ခါတစ်ရံ ဆရာသင်တာ မရှင်းလင်းတာ၊ ဆရာတွက်တာကို မကျေလည်သည့်အခါမျိုး၊ စာမေးသည့်အခါမျိုးမှာ စိတ်တိုပြီး အပြန်အလှန် အော်ဟစ် ထွက်သွားတာမျိုးတွေတောင် ရှိသည်..။ ပြီးလျှင် တစ်ချိန်ချိန် တစ်နေရာရာ လွတ်သည့်အခန်းတစ်ခန်းခန်းမှာ ထိုပုစ္ဆာ ကို စိတ်ကျေနပ်သည်အထိ တွက်ချက်ပြီးမှ ပြန်ရောက်လာတတ်သည်.။ ဒီလို ကျောင်းသားတွေ မထက်ပဲ ရှိပါမည်လား..။ ကျောင်းအားချိန်၊ အတန်း မရှိချိန်တွေမှာ စာကြည့်တိုက်အပေါ်က စာဖတ်ခန်းထဲမှာ အိမ်စာလုပ်သူတွေ၊ တွက်ချက်နေသူတွေ စာဖတ်နေသူတွေ အများကြီး တွေ့ရသည်..။
ကျောင်းမှာ ကျောင်းသားဆိုသူများအတွက် ကန်တင်း ၃ ခုထားသည်.။ နေ့လည်စာ၊ မနက်စာ စားဖို့ အတွက်ဖြစ်သည်..။ ကျောင်းကပဲခန့်ထားသည့် စားဖိုမှူးတွေ ရောင်းသည်..။ ခဏတစ်ဖြုတ်ထိုင် ပြီးရင် အတန်းမီအောင် ပြန်ပြေး.။ အဲ့ဒီလိုတွေချည်း ဖြစ်သည်..။ နောက်တစ်ခုက ဒီက တက္ကသိုလ်ကျောင်းများသည် အင်မတန် ဈေးကြီးကြသည်..။ ချမ်းသာသည့်သူများမှလွဲ၍ တောမှ တက်လာသူကျောင်းသူ/ ကျောင်းသား အများစုက တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ နွေရာသီတွင် အလုပ်လုပ်ကြရသည်.။ ဒီတော့ စာရဲ့ တန်ဖိုးကို သိကြသည်.။ မိမိကိုယ်တိုင် ပိုက်ဆံရှာပြီး မိမိဖာသာ ကျောင်းတက်ရသူများ ဖြစ်ရာ အင်မတန်ကြိုးစားကြ သည်မှာတော့ မထူးဆန်းလှ..။ ကျောင်းသားများက အဆောင်နှင့် ကျောင်းမှာပင် အချိန်က ကုန်ပြီးဖြစ်သည်.။ ဘယ်မှပင် သိပ်မသွားကြ..။ အလည်အပတ်ဆိုတာပင် သွားလေ့သွားထ သိပ်မရှိကြ..။ ကျောင်းချိန်က အားလျှင် အားကစားလုပ်ကြသည်.။ မိန်းကလေးများ လမ်းလျှောက်၊ကြက်တောင်၊ တင်းနစ်၊ ပြေး၊ ရေကူး၊ ယောကျာ်းလေး ဘောကန်၊ ပြေး၊ ရေကူး ၊သန်မာမှု၊ စသဖြင့် အချိန်ကုန်ကြသည်.။ သူတို့လည်း ဂိမ်းမကစားဘူးမဟုတ်၊ ကစားပါသည်.။ မိမိတို့ဆီကမှ အင်တာနက်နှေးကွေးမှုကြောင့် သိပ်မရှိဟု ဆိုရမည်.။ ဒီမှာ Counter Strike ကစားမလား၊ Dota ခုတ်မလား၊ Cross Fire ပစ်မလား.။ Level တက်အောင် ခက်ခက်ခဲခဲကစားပြီး Items တွေ တကယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ရောင်းရ ဝယ်ရသည့် ဂိမ်းများ ကစားမလား စသဖြင့် အစုံရှိသည်.။ သို့သော် ဒါတွေက သူ့အချိန်နှင့်သူ ဖြစ်သည်..။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများတွင် အားကစား ရမှတ်ရှိသည်.။ အားကစားနည်းပြလည်း ရှိသည်.။ အားကစားရမှတ် မပြည့်လျှင် နွေရာသီ အားကစား Camp မှာ အောင်မှတ်မပြည့်မချင်း ပြန်ဖြေရသည်.။ ထိုသို့ ဖြစ်သည်.။
( အတန်းအားချိန်၊ ညနေပိုင်းတွေမှာ အားကစားကို အားထည့်ပြီးလုပ်ကြသည်)
မိမိတို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပြည်တွင်းဖြစ် စာပေတွေမှာ ဦးနှောက်တွေ ဇကာချ ခံရပြီးသားဖြစ်သည်..။ အနောက်တိုင်းဆိုတာ အရှက်အကြောက်မရှိ.ကြောင်း၊ လိင်ကိစ္စတွေ ဘယ်လို ပွင့်လင်းကြောင်း၊ လူအချင်းချင်း ဘယ်လို ဆက်ဆံ ကြောင်းများ၊ မြန်မာပြည်သူတွေ ဘယ်လို ယဉ်ကျေးကြောင်း၊ ကမ္ဘာမှာ ယဉ်ကျေးမှု အထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် Hightlight လုပ်ထားသော အရာကွက်ကွက်လေးများကိုသာ မြင်ခဲ့ရသည်..။ မမှတ်ဘူးလား မှန်ပါသည်.။ ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ခဲ့ဖူးသလိုပင် လိင်ကိစ္စ ပွင့်လင်းသည်.။ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး တစ်ဆောင်တည်း၊ တစ်ထပ်တည်း ထားသည်.။ အတူနေသူများရှိသည်.။ ဒါတွေက အတု မယူသင့်သော အချက်များဖြစ်သည်..။တကယ့်တကယ်ပင် အတုယူစရာတွေ အများကြီး ရှိနေပါသည်.။ မိမိပြောခဲ့သော အရာများသည် မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူငယ်များ၏ အကြောင်း၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ၏ အကြောင်းသာ ဖြစ်သည်.။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် လူငယ်ထုအပေါ်တွင် အားထားရန် လိုပါသည်..။ နေရာတကာ လူကြီးတွေကချည်း လုပ်နေ၍ မဖြစ်ပါ..။ Generation ကျ သွားသည်ဆိုသည့် စကားကိုလည်း နာတတ်ရန် လိုပါသည်...။ ပြည်တွင်းစစ်တွေ ပြီးဆုံးသည့်အခါ အစိုးရက နိုင်ငံနှင် မမျှတစွာ ကုန်ကျနေရသော စစ်သုံးစရိတ်တွေကို ပညာရေးတွင် ပုံအော အသုံးချရန် တကယ်ပင် လိုအပ်နေပါပြီ..။
(ကျောင်းသားတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကလည်း အင်မတန်ပေါပါတယ်.။ ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ လုပ်လိုသော အလုပ်များအတွက် Microsoft တို့ ABBYY တို့ Yandex တို့လို ကုမ္ပဏီကြီးတွေကအလုပ် ခေါ်ဖို့ မကြာခဏ ခုလို လာပြီး ကြော်ငြာပါတယ်.။)
ကျွန်တော်တို့ တကယ်ပင် လိုပါသေးသည်
မိမိယခုရေးနေရခြင်းမှာ နိုင်ငံခြားရောက် ဘဝင်မြင့် လေကျယ် အောက်ခြေလွတ်ပြီးရေးနေခြင်းမဟုတ်ပါ..။ မိမိ အားကျမိသော ပညာရေးနှင့် လူငယ်ကဏ္ဍ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အတုယူနိုင်စေလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်..။ လမ်းမပေါ်က မာဖီးယားဆန်ဆန်၊ ဂန်းစတား ဆန်ဆန် ကျောင်းသားများကို မမြင်လိုတော့ပါ..။ အထူးသဖြင့် ရွှေမန်းက တက္ကသိုလ်တွေလို.ဆိုင်ကယ်တွေ တစ်ဝီးဝီး အချင်းချင်း ငြိကြ၊ သမကြ ၊ ကွဲပြဲကြတွေ မကြားလိုတော့ပါ...။ ဒီမှာ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းသားအလုပ်၊ ကျောင်းသားတာဝန် ကျေနေစဉ်မှာ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသားတွေ သမဂ္ဂဖွဲ့ပြီး ရုံးရုံးရုံးရုံးလုပ်နေတာတွေလည်း မမြင်လိုတော့ ပါ.။ မိမိတို့ နိုင်ငံကြီးကို တစ်ချိန်ချိန်မှာ လက်လွှဲတာဝန်ယူမည့်သူများကို အခြားနိုင်ငံကျောင်းသားတွေထက် ဆံတစ်မျှင်၊ နှမ်းတစ်လုံးမျှ အရည်အချင်း မလျော့စေလို၍ ရေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ...။
မှတ်ချက်။ ။ အစ်ကိုတစ်ယောက်၏ စကားကို သတိရသဖြင့် ပြန်ပြောပါဦးမည်..။
“ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကသူတွေက ဟိုးအရင်ကတည်းက ပြဿနာတွေ၊ စစ်ပွဲတွေနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တာ. ဓါးကိုင်သူရဲကောင်းတွေက၊ ပညာရှင်တွေထက် ဘုန်းကြီးတဲ့ နိုင်ငံ၊ မဟာဗန္ဓုလနဲ့ ယောဘိုးလှိုင်နဲ့ ဘယ်သူနာမည်ကြီးလဲ ကိုမိုးသက် စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ” တဲ့.။ ဒီနိုင်ငံမှာ စာပေပညာရှင်တွေ၊ အတတ်ပညာရှင်တွေကို တခမ်းတနားနဲ့ ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ ကျောက်ရုပ်တွေ၊ လမ်းနာမည်တွေ၊ ဘူတာနာမည်တွေကိုတွေ့တိုင်း ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ Culture ရဲ့ ပျော့ကွက်လေးကို မြင်နေမိတယ်.။ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကိုတောင် “ ပယ် ” သင့်နေပါပြီဗျာ..။
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 2:03 PM
Posted by မိုးသက် at 2:03 PM Read more
Thu December 8, 2013 at 12:53 AM
သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အမတို့ဥာဏ်ရည်အဆင့်အတန်းကတော့ မနိမ့်တာသေချာတယ်။
ကွာနေတာဘာလဲဆိုတာလဲ.သိသင့်နေပြီ။အခုစပြင်မယ်ဆိုရင် နောင်အနှစ်၃၀ကြာအုန်း နောက်မကျသေးပါဘူး။စာသင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီမှာပဲ။ဒီပို့စ်လေးတကယ်သဘောကျပါတယ်မိုးသက်ရေ ^_^
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ မှတ်ချက်က ကျွန်တော့်ရဲ့ စာမူခလို့ ဆိုလို့ရသလို..
အခြေတိုးမြင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့်၏ ။
ပြောင်လျက်ဝင်းလျက် ကျန်စေသတည်း ။
၁၉၃၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း
Alas, Human world, human life
Must become old, Painful-then die
But if you die
Your place of birth, your land
Should develop and remain
Your Nationality and language should also
Progress, be highttened and remain.
The pleasant pagoda you worshipped
And shared your merits
May the radiant truth and remarkable
Remain bright an bright.
(Yangon. 24 September 2000 By Prince Taw Phaya Galae Aung Zae)
Music in current Mood
မွနျမာ့ရိုးရာသင်ျကွနျပှဲတျော နှငျ့ အတာအိုး အကွောငျးသိကောငျးစရာ..... - *သင်ျကွနျပုံပွငျ* တခါက သိကွားမငျးနှငျ့ ဗွဟ်မာမငျးတို့ ( ၂ ) ယောကျ စကားလကျဆုံပွောကွရာ ‘ကဿပဘုရားရှငျလကျထကျ မတိုငျခငျက လူ့ပွညျ၌ တဈပတျလြှငျ ( ၈ ) ရကျ ရှိ...
လတျတလော ခံစားရတဲ့အကွောငျးတှေ - ဒီစာကိုရေးတော့ ကနြေျာ့ ရဲ့ လူမှုကှနျယကျအကောငျ့ကို ပိတျထားတာ အတျောကွာခဲ့ပွီ။ ဒီလို အကွပျအတညျးကာလမြိုးမှာ ရှောငျနရေတာကိုလိပျပွာမလုံနိုငျဘူး။ မိသားစုနဲ...
စာအန်ခြင်း (၂) - " စာအန်ခြင်း (၂) " မျိုသိပ်ရလွန်းလို့ " အ " သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ချစ်ရေးချစ်ရာ ဆိုတာ အပြစ်ရေး ၊ အပြစ်ရှာလောက် မလွယ်ကြောင်း လူတချို့ကို မ . . .ရှင်း . . . ...
HO-OH Mobile (ဟိုအို မိုဘိုင်း) - HO-OH Mobile (ဟိုအို မိုဘိုင်း) မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနေသော Mobile Phone နှင့်သက်ဆိုင်သည့် Error များ ............... *Software For Android Error* (Samsun...
မြေဇာပင် တမ်းချင်း - ဆီးရီးယားအပါအဝင် စစ်ဒဏ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ခံရတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေဘဝကို အိုင်ဒီယာကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးဆွဲထားတဲ့ စာမဲ့ကာတွန်း ဖြစ်ပါတယ် ပုံကို အင်တာနက်မှ ...
နိုဝင်ဘာကျိန်စာ - *စိတ္တဇဆန်ဆန်ပြုမူတတ်သလို* *ကြောင်တောင်တောင်တွေးခေါ်တတ်တယ်* *ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ဒဏ်ရာအတိုင်း ဆက်ဆံတတ်လို့* *နားလည်ဖြေသိမ့်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့ဘ၀မှာ * *နေသားမကျတကျနဲ...
Theme Design by မေမြို့မိုး